Xildhibaano sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay u dhici laheyd doorasho qof iyo cod | Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaano sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay u dhici laheyd doorasho qof...
Xildhibaannadan oo gaarayay illaa 50 meeyo ayaa waxaa ku jiray Wasiiro ka tirsan Xukuumaddii dhacday, waxaana ay sheegeen in ugu horeyn ka shaqeynayaan Midnimada Baarlamaanka.
Waxaa uu sheegay inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan khatar ay sheegeen inay dalka kusoo fool leedahay, sidoo kalena shirarka ay uga hadlayaan xaalada dalka iyo doorashooyinka ay sii wadi doonaan.
Ololaha ay bilaabeen Xildhibaannada ayaa u muuqda mid ku dhex qarsoon muddo kororsi, iyadoo dad badan is weydiinayaan sida xilligan doorasho qof iyo cod ku suura geli karto marka loo eego waqtiga u haray Dowladda Federaalka, sidoo kalena aan loo diyaar garoobin jawigii doorashada ku dhici laheyd sida amniga dalka oo aan weli gacanta ugu jirin dowladda iyo tirakoob dadka oo aan la sameyn.
Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa horay u sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu doonayo muddo kororsi, isla markaana waddo kasta uu u marayo inuu helo muddo kororsi labo sano ah.
Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ayaa waqtiga uga eg yahay 27 bisha November sanadkan 2020.